Soomaaliga – Arbetarpartiet
Xisbiga shaqaalaha waxey la tahay in aad baartid haddii aad codeyneysay doorashada 14 september ee sanadkan. Waxaad ka qeby-qaadan kartaa seddex doorasho oo dhaceysa 14 september ee sanadkan, xitaa haddii aadan heysan dhalashada muwaadinimo ee dalka!
Warqadaha doorashooyinka seddex midab oo kala duwan beey leeyihiin
Warqada doorashada ee cad
Waxaa loo isticmaalaa doorashada golayaasha deegaanka sida (hogaamiyayaasha deegaanka ee Umeå). Warqada doorashada ee cad waxaad ku codeyneysaa xisbigii aad dooneyso in uu maamulo skoolaadka, daryeelka caruurta, daryeelka waayeelka, isboortiga,hiddaha iyo sidii dhismaha guryaha loo maareeyn lahaa.
Codeyntan waad codeyn kartaa xitaa haddii aadan hadeysan dhalashada dalka ee Sweden.
Warqada doorashada ee buluuga ah
Waxaa loo isticmaalayaa codeynta golayaasha gobolka sida waaxaha iyo maamulka caafimaadka ee gobolka (Västerbottens läns landsting ). Warqada doorashada ee buluuga waxaad ku codeyneysaa xisbigii aad dooneyso in uu maamulo daryeelka bukaanka (sjukvården).
Codeyntan waad codeyn kartaa xitaa haddii aadan heysan dhalshada dalka ee Sweden.
Warqada doorashada ee jaalaha ah
Waxaa loo isticmaalayaa codeynta barlamaanka dalka (golaha wakiilada/riksdagen) Warqadan doorashada ee jaalaha ah waxaad ku codeyneysaa xisbigii aad u aragto in ay magacaabi karaan dowlada dalka iyo sharci dejinta (Sveriges regering samt stifta lagar).
Codeyntan waa in aad heesataa dhalshada dalka si aad uga qeygasho doorshadan.
Codeyn walba waaad u codeyn kartaa xisbiyo kala duwan
Seddexda nuuc ee doorashada waad u codeyn kartaa seddex xisbi oo kala duwan. Waadna u codeyn kartaa seddexda doorasho hala xisbi oo kaliya. Waxaad kaloo awoodaa in aad u codeyn kartid hal xisbi labo mar halka kalena xisbi kale. Dalkan Isweden waxaa jira dad badan oo doorta in ay u codeeyaan xisbiyo kala duwan doorosho weliba. Adigana sidaa waa sameyn kartaa oo doorasho waliba xisbigii aad is leedahay weey ku haboonyihiin baad u codeyn.
Xisbiga shaqaalaga waxey kaa codsaneyaan in aad u codeyso labo doorasho
Waxaan rajeyneynaa in aad u codeyso xisbiga shaqaalaha (Arbetarpartiet) doorashada baarlamaanka deegaanka ” Umeå kommunfullmäktige” ( Warqada doorashada ee cad). Waxaan rajeyneynaa in aad u codeeyso xisbiga shaqaalaha (Arbetarpartiet) doorashada baarlamaanka gobolka ”Västerbottens läns landsting” (Warqada doorashada ee buluuga).
Sida aan kor ku soo qeexnay doorashada baarlamaanka deegaanka iyo kan gobolkaba ayaa ah meesha laga maamuli doonto sida noloshaada maalinlaha, skoolka iyo daryeelka bukaanka.
Soomaalida waa dad umuhiim ah Umeå
Markii laga hadlaayo luuqadaha ka baxsan Europé luuqada carabiga iyo persiska ayaa ah luuqadaha kaliya ee in ka badan tan soomaliga looga hadlo magaaladan Umeå. Markii laga hadlayana dadka aan ku dhalan Sweden, soomaalidu waxey soo galayaan qeybta afaraad. Kommuunka magaaladan Umeå waxey qeyb fiican ka qaateen taakuleynta luuqada qofku u dhashay ee afka hooyo. Aad beeyna u wanaagsaneyd in taakuleynta luuqada qofku u dhashay lagu bilaabo ilmuhu markeey seddex sano jir yihiin. Laakiin taakuleyntii sidaa aheyd baa hadda lagu bedelayaa ”Talaabooyin guud” taa soo qofina ugoyn waxa loola jeedo. Ururkan Arbetarpartiet (Xisbiga shaqaalaha) wuxuu rabaa in barashada afka hooyo ay ahaato sidii hore. Waa muhiim in dhalaan walba ogsoonaado halkii uu ka soo farcamay awoodna ulahaado in markaa ka dibna uu barto luuqada swedishka.
In ka badan 20 sano ayey soomaalidu la daalo dhaceyeen dagaalo sokeeye. Xadgudibkii itoobiya ay ku gashay dalka soomaliya 2006 waxaa ka dambeeyey dowlada mareykanka taa soo uga sii dartay xaaladii markaa jirtay.Waxaana walaac ah in mareykanku uu hadda bilaabay in uu u diro dalka soomaliya taliyayaal ciidan.
Dhibaatada ka jirta soomaliya waxey sababtay in dad badani ka soo hayaameen qaar ka mida ahna ay yimaadeen Sweden. Markii 1100 soomali ah la celin rabay waxaa mudaaharaadyo badan laga sameeyey meelo kale duwan. Ururkan Arbetarpartiet (xisbiga shaqaalaha) oo markii hore lagu magacaabi jirey Rättvisepartiet Offensiv (xisbiga cadaalada) iyo Somaliska förening (Uruurka soomalida) waxey mudaaharaad ka abaabuleen Umeå. Si wada jir ah ayeyna ugu tageen Invandrarverket i Umeå (Guddiga socdaalka Umeå) uguna gudbiyeen 600 oo magac oo ka soo horjeeda dib u celinta dadkaa soomalida ah.
Si qofkii u soo hayaamay dalkan Sweden oo uga mid noqdo bulshada waxaa qasab ah shaqooyin. Ururkan Arbetarpartiet (xisbiga shaqaalaha) muhiimadiisa koowaad waxey ku saleysantahay in la kordhiyo tirada shaqada, gaar ahaan dhalinta yar. Waxaan ku soo gunaanudeynaa in aan idin la so socodsiino in aan la halgameynay ururuka cusuriyiinta ee Sverigedemokratka ah ilaa iyo 1989. Urur yar baan nahay, laakiin ma nihin musuqmaasuq, ma qaadano wax laaluush ah laakiin waxaan si adag u wadnaa dagaal ka dhan ah mukhaadaraadka mise maandooriyaha faafaya. Qof kasta oo raba in uu ka hortago wax walba oo dhib ku ah dhalinyarada ayaa ku biiraya mise ka mid noqonaya xisbiga Arbetarpartiet (xisbiga shaqaalaha)